Boordiin Filannoo Biyyaalessa Ityoophiyaa yaa'iin waliigalaa ABOn Bitooteessa 4, 2013 gaggeesse ulaagaalee barbaachisu kan hin guunne ta'uu isaan fudhatama hin qabu jedhe. - ETHIOPIANS TODAY
Hoggantoonni yaa’ichaan filataman fudhatama kan hin qabne ta’uu boordichi murteesseera
Boordiin Filannoo Biyyaalessa Ityoophiyaa yaa’ii waliigalaa hoggantoonnii fi miseensonni ABO gaggeesse ilaalchisee ibsa laateera.
Boordichin waldhabdee hoggansa ABO gidduutti uumame ilaalchisee iyyannoowwan, Komii fi Xaalayaa garaagaraa fuudhuun ilaalaa turuu beeksiiseera.
Paartichi yaa’ii waliigalaa gaggeessuun waldhabdee hoggansa gidduutti uumamee akka furatu murtee dabarsuun isaa kan yaadatamuudha.
Boordichis sanadoota dhiyaatan akkaataa labsii lakkoofsa 1162/2011 fi dambii seera paartiin dhimmicha qorachuu beeksiiseera.
Paartichi qaboo yaa’ii, maqaa miseensota yaa’icharratti hirmaatanniin fi mallattoo isaanii, qaboo yaa’ii walga’ii mana maree dhaabbatummaa Bitootessa 5, 2013 gaggeeffamee, dambii bulchiinsaa fooyya’e, yaa’ii Bitooteessa 4, 2013 gaggeeffameerratti hirmaatoonni 500 ol hirmaachuu isaanii, qaboon yaa’ii guutuu ta’uu isaa kan agarsiisuu dhiyeesuun akkaataa labsii 1162/2011 beekkamtiin akka laatamuuf gaafateera.
Boordichis sanada dhiyeessate qorachuu ifoomseera.
Lakkoofsi Miseensota koree hojii raawwachiiftuun yaa’icharratti argamaniin 2/3 gadi ta’uu, miseensonni koree hojii raawwachiiftuu 3 qoftu kan argaman ta’uu, qaboon yaa’ii dhiyaate ulaagaa kan hin guunne ta’uu isaan yaa’iin gaggeeffame fudhatama kan hin qabne ta’uu boordichi murteessera.
Gama biroon dambii ittiin bulmaataa paartichaa keeyyata 16.2 miseensonni mana maree yaa’icharratti hirmaachuu qaban, mirga guutuu miseensummaa kan qaban hoggantoonni ABO duraanii, caasaaleen sadarkaan jiran, qabsoo ummata Oromoo keessatti qooda olaanaa qabaachuun kanneen beekkaman yaa’icharratti hirmaatan % 5 kan hin caalee ta’uu,dhaabbileen ummataa paarticha waliin hojjetan, dubartoonni, dargaggoonni, ogeeyyiin, bakka buutoonni waldaalee yaa’icharratti hirmaachuun isaanii boordichi mirkaneessuu hin dandeenye jedhe.